शुभचन्द्र राई (सुबास)को कथा : स्थानीय चुनाव - LIBJU BHUMJU
शुभचन्द्र राई (सुबास)को कथा : स्थानीय चुनाव
April 29, 2022 May 17, 2022 लिभु संवाददाताLeaveaComment on शुभचन्द्र राई (सुबास)को कथा : स्थानीय चुनाव
कथा : स्थानीय चुनाव
शुभचन्द्र राई (सुबास)
टन्टलापुर घाम लागिरहेछ । उखरमौलो गर्मीले रूखबिरूवामा पातहरू पनि ओइलाएका छन् । पर बरको झ्याङभित्र कोइलीचरी कुहुऽ कुहुऽ गरेर कराइरहेछ । असाध्य गर्मी भएर होला कोइली चरीको त्यो मधुर आवाज पनि झन्झट लाग्दो सुनिंदैछ । हावा फिटिक्क चलेको छैन ।
घरको बरण्डामा राखिएको थोत्रो खाटमाथि पल्टिएर ओल्टयाङ्ग, पल्टयाङ्ग गर्दै निदाउने प्रयास गर्दैछ भद्रबहादुर बूढा । ऊ कहिले हातमा लिएको टोपीले आपैmलाई हम्किन्छ । कहिले मुखलाई बंग्याएर हावा बोलाउँछ । हावा भने बेपत्तैछ । झारको एउटा पात पनि हल्लिएको छैन । बूढालाई झिंगाले पनि उत्तिकै दुःख दिदैछन् ।
“हत्तेरी कत्तिसारो गर्मी भएको हौ आज ? होन पुर्परोमा आगो नै पो बल्ला जस्तो छ राम..। राम.. । राम..। गन्गनाउँदै भद्रबहादुर खाटबाट जुरूक्कै उठे ।
समय त्यस्तै दिनको २ बजेको हुँदो हो । परिवारका सबै सदस्यहरू आ–आफ्नो काममा गैसकेका छन् । बूढाकी श्रीमती मनमाया गाेंठमा गाई भैसीको भकारो सोहोर्दै थिइन् । बूढा उठेर खाटमै टुक्रुक्कै बसे र आलस्यपूर्ण एक लामो हाई काढे । अनि गोजीबाट पातमा बेह्रेको ठुटा सुल्पा निकालेर सल्काएर लामो लामो कस लिन थाल्यो । बूढाका नाकदेखि निस्केका सुल्पाको धुँवाले वातावरण कुइरिमण्डल भयो । त्यसै बेला माथि सिरानटोल तेर्सो मानिसहरू कराएको, नाराहरू लगाएको आवाज सुनियो । आवाज अस्पष्ट थियो त्यसैले भद्रबहादुर बुढा घरमाथिको डिलमा निस्किएर त्यो आवाज राम्ररी ठिम्याउने कोशिर गरे ।
नेपाली कांग्रेस – जिन्दावाद ।
भोट कसलाई – नेपाली कांग्रेसलाई
भोट केमा – रूखमा ।
चारतारे झण्डा बोकेका एक हुल मानिसहरू बडो जोससँग नारा लगाउँदै तेर्सो लागिरहेका थिए । लस्करका अगाडि युवाहरू बुरूक्क, बुरूक्क उफ्रँदै चिच्च्याइरहेका थिए । तिनीहरूलाई पटक्कै गर्मी भएको थिएन ।
हल्ला सुनेर मनमाया पनि बूढाकै छेउमा आइपुगिन् । उनी पनि जुलुसलाई ठिम्याउने प्रयास गर्दै थिइन् । निधारको पसिना पुछ्दै भद्रबहादुर बूढा बोले – “राम.. राम.. राम..। यस्तो उखर्मौलो गर्मीमा कसरी सकेका होलान् चिच्च्याउँदै हिड्न यिनीहरू ?”
“ए बूढा । हेर त.. । हेर त.. । ऊ त्यो अगाडि माथि माथिसम्म हात उठाएर नारा लगाउने चतुरे होइन ?” बुढीको कुरा सुुनेर बूढाले राम्ररी ठिम्याउँदै बोले – “हो क्यार.. हो । हो । चतुरे नै हो ।”
“हेर दइचिउरे मोरा । यस्ताले पनि के राजनीति गर्छन् ? हिजोसम्म राप्रपामा हिड्दै थियो । अब राप्रपामा घिच्नु पाएन होला फेरि कांगे्रस भएछ आजदेखि । थुइक्क मोरा ।” मनमायाले टाढै भएपनि जुलुशतर्फ फर्केर धारेहात गर्दै पिचिक्क थुकिन् र नराम्रो गरी मुख बिगारिन् ।
“यो सब कमजोरी पार्टी र नेताहरूकै हो । पार्टीले योग्य, सक्षम, इमान्दार उम्मेद्वारहरूलाई चुनावमा उठाएको भए जनतालाई घुस खुवाउँदै किन हिंड्नु पथ्र्यो ? जसले चाकरी चाप्लुसी ग¥यो त्यसैलाई टिकट दियो, इमान्दार कार्यकर्ताहरूको दुई पैसाको मोल छैन । अनि पनि यस्तो हालत हुँदैन त पार्टीहरूको ? चतुरेले ठीक ग¥यो । यिनीहरूको सस्तो पैसा त खाइदिनै पर्छ । खै भेट्टाए त म पनि पो खान्थें हौ ।” भद्रबहादुर बूढाले राजनीतिक विष्लेषण गर्दै रोष प्रकट गरे । त्यसैबेला पुछार टोलको गल्लीमा पनि कोलाहल र माइक बजेको आवाज सुनियो । भद्रबहादुर बूढा र मानमायाले आफ्नो ध्यान त्यतैतिर आकर्षित गरे ।
नेकपा एमाले – जिन्दावाद ।
रातोघाम – लालसलाम ।
भोट केमा – सूर्यमा ।
भोटकसलाई – नेकपा एमालेलाई ।
एक लस्कर मानिस जोडजोडले नारा लगाउँदै अगाडि बढिरहेका थिए । हँसिया हथौडा अंकित रातो झण्डा, नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह घाम अंकित रातो झण्डा बोकेका जोशिला युवाहरूले त्यो तालुसेक्ने मध्यदिनको घाममा बडो जोसका साथ नारा लगाइरहेका थिए । माइकबाट उम्मेद्वारको नाम लिएर आकाश पाताल जोड्दै भोट माग्दै युवाहरू अगाडि बढिरहेका थिए । त्यो दृष्य साँच्चै रमाइलो थियो । घामले आपूmहरूलाई पोलिरहेको कुरालाई पनि बिर्सेर बूढाबुढी कहिले कांग्रेसको त कहिले नेकपा एमालेको जुलुसहरूलाई हेरिरहेका थिए । दुबै पार्टीको जुलुस बतासे डाँडामा पुगेर आमसभामा परिणत हुनु पर्ने थियो । भद्रबहादुर बूढालाई पनि के जोस चल्यो कुन्नि हत्तपत्त तल पिंढीमा झ¥यो । भित्तामा झुण्ड्याएर राखेको थोत्रो इस्टकोट लगायो । टोपी टाउकोमा राम्ररी मिलायो र स्वास्नीलाई एक बटुको जाँड मागेर स्वाट्टै पारी, हात पछाडि बाँधेर बतासे डाँडातिर लागे ।
बतासे डाँडामा जोडजोडले एकजना नेता माइकबाट भाषण गर्दै थियो । गाउँका केही मानिसहरू यत्रतत्र छरिएर भाषण सुन्दै थिए । भद्रबहादुर बूढा पनि आमसभा स्थलमा पुगे । आमसभा गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेछ ।
“आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, एमाले, कांग्रेस पार्टी भनेका जनतालाई ढाँटेर छलेर भोट माग्ने पार्टीहरू हुन् । कांग्रेसको सरकार हुँदा कांग्रेसले देशको कोशी गण्डकी महाकाली नदी भारतलाई बेचेर देशलाई अन्तरघात ग¥यो । त्यसैले कांग्रेस भनेको अराष्ट्रिय पार्टी हो । त्यस्तै संसारमा हराउँदै गएको अवस्थामा नेपालमा पलाउँदै गएको नेकपा एमाले वास्तवमा कम्निस्ट पार्टी होइन । कम निष्ठ भएको पार्टी हो । धोकेबाज र ढाँट पार्टी हो । जनतालाई सपना बाँड्ने पार्टी हो । त्यसैले यो स्थानीय चुनावमा एमाले र कांग्रेसलाई भुलेर पनि भोट नदिनुहोला । राप्रापाको हलो चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिनु होला । किनभने हलो भनेको किसानको चिन्ह हो । किसानको पार्टी हो ।” आफ्नो पार्टीको नीति र कार्यक्रमभन्दा बिपक्षी पार्टीलाई लान्छना र गाली गरेर राप्रपाको नेताले आफ्नो भाषण सके । त्यसैबेला एमाले र कांग्रेसको जुलुश पनि आमसभा स्थलमा आइपुग्यो ।
दुबै पार्टीको आमसभा शुरू भयो । कांग्रेसका नेताले भन्दै थिए राप्रपा भनेको पुनरउत्थानवादी शक्ति हो यो पंचायतको नविकरण हो । शोषक सामन्त भ्रष्टहरूको पार्टी हो । त्यस्तै एमाले भनेको कम्युनि२ट होइन षड्यन्त्रकारी र प्रजातन्त्र विरोधी पार्टी हो यी पार्टीहरूलाई झुक्किएर पनि भोट दिनु हुँदैन ।
उता कम्युनिस्ट नेता कुर्लँदै थिए । कांग्रेस भनेको देश बेचुवा पार्टी हो । कांग्रेस भारतबाट संचालित छ । यो पार्टीले देशको नदीनालाहरू बेचेरमात्र चित्त बुझाएन । यो पार्टीले टनकपुर बेच्यो । मेचीको सिमानामा रहेको नेपाली भू–भाग भारतलाई बेच्यो । यस्तो पार्टीलाई भोट दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्नु हो । त्यस्तै राप्रपा भनेको मण्डले कुण्डलेहरूको पार्टी हो । यो पार्टीलाई भोट दिनु पुनः तीसवर्षे पंचायती कालरात्रिलाई निम्त्याउनु हो । त्यसैले आदरणीय जनसमुदाय नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा तपाईको अमूल्य मत खस्न जरूरी छ किनभने एमाले भनेको एकमात्र जनताको पार्टी हो । विकासको ढोका खोल्ने पार्टी हो । लाल सलाम ।
कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो नेताको भाषणको बिचबिचमा पुङनपुछर ताली बजाइरहेका थिए । पार्टी नेताहरू एक आपसमा नीतिगत तर्कभन्दा व्यक्तिगत लान्छना लगाएर हिलो छेपाछेप, गाँड कोराकोर, कट्टु फुकालाफुकाल गर्दै थिए ।
नेताहरूको भाषण सुनेर भद्रबहादुर बूढा अचम्मै परे । यी नेताहरूले यसरी एकापसमा गाँड कोराकोर फोराफोर नगरेर आ–आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर जनतासामु भोट मागे भोट पाउदैनन् र ? एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई होच्याउँदैमा, गाली गर्दैमा आरोप प्रत्यारोप लगाउँदैमा बढी भोेट आउँछ र ? आखिर प्रजातन्त्र आएको छ जो कोहीलाई कुनै पार्टीमा लाग्ने मौलिक अधिकार छ । तर एउटै गाउँमा एउटै ठाउँमा बसेर यसरी तलै झरेर गाली गरागर गर्नु कत्ति सम्म ठीक हो ? भद्रबहादुर बूढा यिनै कुराहरू सोच्दै घरतिर लागे । देशका जल्दाबल्दा यी पार्टीहरूमध्ये कुन पार्टीलाई भोट लगाउने हुन् जनताहरू ? भद्रबहादुर बूढाले विचार गर्दै छ । हेरौ बूढाले पनि कुन पार्टीलाई भोट हाल्ने हुन् यो स्थानीय चुनावमा ।
(यो कथा प्रजातन्त्रकालमा रचना गरिएको र धरानबाट प्रकाशित विजयपुर साप्ताहिक २०५४ जेठ २ गते प्रकाशनमा आएको थियो । सो कथालाई २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सान्दिर्भक भएको हुँदा पुनः प्रकाशन गरिएको छ । सम्पादक)
गनेस वाम्बुले राईको वाम्बुले भाषामा कविता : उन आः त्वामल्वा झुल्यामो
कवि तोसेल बोबोको वाम्बुले कविता : रिबे (सोल्टिनी !)
‘बारपाक’- गोरखा भूकम्पमाथि ‘दृष्टि साहित्य’
संस्मरणः अतीतका पानामा वाम्बुले साँझ
कवि गगन राईको मृत्यु चिन्तन कविता- म अकालमा मरें भने
June 10, 2021 June 11, 2021 लिभु संवाददाता
The Wambule language and its Sociolinguistic situation by Krishna Prasad Chalise
June 8, 2022 June 8, 2022 लिभु संवाददाता
हर्कराज राई ‘बुद्धि’को आलेख : ‘फोकुलेङ कुलो’ गीत बनेको कुलो फेरि यसरी बन्यो
June 2, 2022 लिभु संवाददाता
‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ कवि तोसेल बोबोलाई (पुरस्कृत कविता अनुवादसहित)
May 28, 2022 June 8, 2022 लिभु संवाददाता
शुभचन्द्र राईको संस्मरण भाग–२ : किराया सुनसरीमा बितेका २५ वर्ष
May 20, 2022 लिभु संवाददाता
स्थानीय निर्वाचन २०७९ अनुभव : एक मतदान केन्द्र, जहाँ मतदाता विभेदमा छन्
May 17, 2022 लिभु संवाददाता